Mayelana NATHI - Dongying Shengyu Metal Product Co., Ltd.
I-Dongying Shengyu Metal Product Co., Ltd. iyinkampani ebanzi edidiyelwe eklama ngokukhiqiza nokuhlanganisa, ekhethekile ezinhlobonhlobo zokuphonsa ngokunemba okuphezulu kanye nezingxenye ezenziwe ngomshini, njengezingxenye zemishini yoketshezi, izingxenye zepompo nezama-valve, izesekeli ze-impeller, izingxenye zezimoto zesitimela zedolobha, izingxenye zemishini yokudla, ukufakwa kwamandla kagesi , i-hardware yokwakha, izingxenye zemishini yezolimo nezinye izinhlobo zezingxenye zemishini, ezenziwe kakhulu ngensimbi engagqwali, insimbi engamelana nokushisa, i-carbon steel, i-alloy steel ephansi, ama-alloys okushisa aphezulu, ama-alloys ethusi nama-aluminium alloys.
Inkampani yethu inesethi ephelele yemishini yokunemba kufaka phakathi i-Computer Numerical Control lathe nemishini yokucubungula indawo (ukupholisha, ukugaya njll.) Yokusakaza, imishini yokwelapha ukushisa, isilawuli sokuhlola inkungu yokulwa nokugqwala kasawoti, imishini yokuhlola ingcindezi, okhethekile wokuhlola ibhalansi, I-CMM, i-spectrometer, i-tensile tester, i-metallographical microscope, i-hardness tester, iphrinta ye-laser neminye imishini yokuhlola amandla emishini. Sisungule uhlelo oluqinile lokuqinisekisa ikhwalithi futhi singanikeza yonke inqubo yesevisi kusuka ekubonisweni kokuphonsa ngokunemba emhlanganweni nasemikhiqizweni eqediwe, ethole imibono emihle kakhulu evela kumakhasimende ethu eFrance, eJalimane, e-USA, e-Australia, eRussia, eJapan, eNew Zealand, e-Italy, ISpain namanye amazwe kanye nezifunda.
Ukuzivumelanisa nezimo kwenkampani kuvumela ukukhiqizwa kweyunithi kanye nokukhiqizwa kochungechunge oluningi, kusukela ekwakhiweni kwesikhunta kuze kube sekuqedeni kuze kube sekuhlinzekweni kwezingxenye ezihlanganisiwe ukufeza izidingo ezahlukahlukene ezivela kumakhasimende. Imikhiqizo yokusakaza kanye nomkhiqizo waminyaka yonke ongaphezu kwamathani ayi-1100.Sinethemba lokuthi sizinikele ezingxoxweni zebhizinisi eziqotho nazo zonke izivakashi ezifuywayo nezangaphandle.
Endleleni yokuthuthuka ngokuzayo, uShengyu uzokufeza okulindelwe futhi aqhubeke nokwenza imizamo yokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi engabizi kakhulu nezinsizakalo ezigculisayo ngokuzidlula ngokuqhubekayo, ukuzinqoba nokuzakha kabusha ukuthuthukisa ukuncintisana kwebhizinisi.
Isiqubulo senkampani: "Akukho ukukhubazeka kwikhwalithi yomkhiqizo, futhi akukho zikhalazo ezivela kumakhasimende."
Inhloso yenkampani: "Ukusebenza kahle kwakha uphawu, futhi ubuqotho bubeka ikusasa."